INokia 9 PureView: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
INokia lolunye uphawu olunomnyadala wokubonisa kwi-MWC 2019. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ubukho bakhe kumsitho e-Barcelona. Esinye sezixhobo ezilindelweyo kulo msitho yiNokia 9 PureView, isiphelo esiphezulu esilindeleyo sophawu, esima ngaphandle kwiikhamera zangemva ezintlanu. Ifowuni eye yafumana ukuvuza okuninzi kutshanje.
Okokugqibela, sinokwazi ukuba esi sixhobo sele sisemthethweni ngokusemthethweni kolu hlelo lwe-MWC. INokia 9 PureView yeyona nto iphambili kwiselfowuni, ejonge ukuba nempumelelo efanayo kwinqanaba eliphezulu abanalo ukuza kuthi ga ngoku phakathi kuluhlu. Enkosi ngayo, ziphakathi kweempawu ezintlanu ezithengisa kakhulu kwiimarike ezininzi.
Yimodeli leyo Ufumene ukulibaziseka okuninzi ekumiselweni kwayo. Zaqengqeleka iinyanga kwathiwa izofika ngo January, nangona i-brand ekugqibeleni ikhethe ukusishiya nesixhobo kule MWC 2019. Usuku olugqityiweyo noluya kukwazi ukwazi le smartphone, ineekhamera zayo ezintlanu ezingasemva. Uhlobo lwayo lokuqala kwimarike.
1 Ukucaciswa kweNokia 9 PureView
2 INokia 9 PureView: Ukubheja ekufotweni
3 I-Android esulungekileyo kwakhona
Ukucaciswa kweNokia 9 PureView
I-brand isishiya kunye noluhlu oluphezulu olubalulekileyo. Kwiimodeli zayo zangaphambili kweli candelo, ikhamera yayiyinto eye yasilela kwaye yavelisa ukugxeka kubasebenzisi. Kuba, INokia ibeka ugxininiso olukhulu kwezi khamera, eziye zaveliswa kwakhona ngeZEISS. Nangona uphuculo oluninzi lulindelwe kubo. Ngaba baya kwenza oko kulindelweyo?
Okwangoku sikushiya kuqala nge Ukucaciswa ngokupheleleyo kwale Nokia 9 PureView uphawu lwenziwe ngokusesikweni kule MWC 2019.
Ukucaciswa kobuchwephesha iNokia 9 PureView
Umzekelo 9 iPureView
Isikrini 5.99 intshi ye-AMOLED ngesisombululo se-1440 x 2960 pixels kunye nomyinge we-18.5: 9
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 845 i-core-core
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128 GB (Iyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB)
Ikhamera esemva Ilungu le-12 MP RGB f / 1.8 +12 MP RGB f / 1.8 + 12 MP BN f / 1.8 + 12 MP BN f / 1.8 + 12 MP BN f / 1.8
Conectividad I-WiFi 802.11 A / C iBluetooth 5.0 A-GPS GLONASS USB 3.1 Uhlobo-C
Ezinye izinto Inzwa yeminwe ye-NFC phantsi kwesikrini IP67
Ibhetri I-3.320 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ubukhulu X x 155 75 7.9 mm
Ixabiso IRandi ye699
Ukudityaniswa kweekhamera kubalulekile kwesi sixhobo. Kule meko, kule Nokia 9 PureView sifumana imibala emibini yeekhamera, ezintathu ze-monochrome, i-flash kunye ne-sensor enzulu. Umdibaniso olungileyo apho kuya kubakho ukuthatha iifoto ezintle kuzo zonke iintlobo zeemeko.
Siphambi kwe I-smartphone yokuqala yehlabathi eneekhamera ezintlanu zangemva. Uhlobo lwentengiso luphambi kwezinye iifemu ezinje ngeSamsung, ebikhethe ii-sensors ezine zangasemva kwezinye zezixhobo zazo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kukubheja okucacileyo kwenkampani ukubuyela phezulu ngesi sixhobo.
INokia 9 PureView: Ukubheja ekufotweni
Njengoko bekuxoxiwe iinyanga ezimbalwa, isixhobo iza ne-chip eyilelwe kukuKhanya. Iyakwazi ukulawula inzwa nganye yefowuni ngokuzimeleyo. Ukongeza, ivumela iinkqubo ezithile ukuba zenziwe ngokuhambelana neprosesa yefowuni. Iprosesa eyi-Snapdragon 845, ethi ngelixa inamandla, ayisiyonto intsha. Kwaye kwavuza ukuba le yayizakuba yiprosesa yeNokia 9 PureView, into abaninzi abangayithandiyo.
Nangona ukuKhanya kusebenza njenge-co-processor. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba indibaniselwano phakathi kwezi zimbini ivumela ukufumana ukusebenza okuhle kwesi sixhobo. Inzwa nganye ye-smartphone inomsebenzi othile. Sele sithethile ngolwabiwo, ke kuyacaca ukuba iya kusetyenziselwa ntoni nganye nganye. Olunye lweempawu eziphambili zefowuni kukuba ungathatha iifoto ezimnyama kunye ezimhlophe ngenqanaba eliphezulu lokuthelekisa kunye neenkcukacha. Kwakhona ukudubula okude, ukuya kuthi ga kwimizuzwana elishumi.
Le Nokia 9 PureView iyakwazi ukuvelisa ifoto ukuya kwii-megapixels ezingama-60 enkosi kwezi khamera. Ukongeza, sifumana ubukrelekrele bobugcisa kunye nokufunda ngomatshini kwisixhobo, esivumela ukuba sivelise ukuya kuthi ga kwi-1.200 yeelayile ezinzulu. Ukujonga iimpawu zezi khamera, yonke into ibonisa ukuba sijongane neyona fowuni inomdla kwintengiso yale ntsimi. Kanye le nto inkampani ebeyifuna ngoku.
I-Android esulungekileyo kwakhona
Njengoko kuqhelekileyo kwii-smartphones zohlobo, Sifumana i-Android emsulwa, ngaphandle kocwangco lokwenza ngokwezifiso kuyo. INokia 9 PureView ifika nayo Android One, kuhlobo lwayo lwe-9.0 yePie ngokwasekhaya. Ke abasebenzisi ngoku banokuyonwabela inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kwisixhobo. I-brand iyaqhubeka nokuba ngomnye wabaxhasi abakhulu be-Android One.
Ukongeza, ubukho be Isiqinisekiso se-IP67 sokuchasana namanzi kule modeli. Kwelinye icala, sifumana inzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen, njengoko sibona kwiimodeli ezininzi kuluhlu oluphezulu lwe-Android. Sikwanokuqwalaselwa kobuso kwisixhobo.
Nje ukuba zonke iinkcukacha malunga nale smartphone zaziwe, konke okuseleyo kukwazi Singalindela ukuba iphehlelelwe nini Ukuthengisa le Nokia 9 PureView. Ngethamsanqa, kwintetho yayo siyifumene le datha. Ke siyayazi le nto, ukongeza kwixabiso layo lokuthengisa.
Okomzuzwana ukumiliselwa kwesixhobo e-United States kuqinisekisiwe ngenyanga kaMatshi. Siyazi ukuba izakufika eYurophu, nangona inkampani ingakhange ithethe nto malunga nomhla wokufika eYurophu. Kodwa ngokuqinisekileyo kuya kuba sentwasahlobo ngokunjalo. Ke kuyakufuneka silinde ukuba ezinye iindaba zinikezwe malunga noku.
Ngokumalunga nexabiso, ekumiselweni kwayo eUnited States, le Nokia 9 PureView izakufika ngexabiso leedola ezingama-699. Asazi ixabiso eliza kuba nalo eYurophu. Nangona yonke into ibonisa ukuba iya kuba phezulu, kodwa akukho datha ikhonkrithi kulo mba ngalo mzuzu. Sinethemba lokuva kuwe kungekudala. Ngokubhekisele kwimibala, ngalo mzuzu kuye kwenzeka kuphela ukuba ubone ifowuni iblue. Asazi ukuba kuya kubakho imibala emininzi ekhoyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 9 PureView: I-smartphone eneekhamera ezintlanu ezisemva ngokusemthethweni